कर्णाली समृद्धिमा कतिन्जेल पछाडि ? – www.agnijwala.com
कर्णाली समृद्धिमा कतिन्जेल पछाडि ?
काठमाडौं,२ बैशाख–प्रचुर सम्भावना भएर पनि कर्णाली प्रदेश बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकमा सबैभन्दा गरिब प्रदेशमा पर्छ । तैपनि, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न सकियो भने समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ ।
नयाँ योजना, नीतिभन्दा बढी मनोविज्ञानमा परिवर्तन र व्यवस्थापनमा जोड दियो भने कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पर्यटन, जडीबुटी, वन, जलस्रोत मुख्य आधार हुन् । यसमा सहयोगीका रूपमा थपिन्छ, कृषि ।
भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा पशुपालन, फलफुल र खेतीपातीको ‘पकेट क्षेत्र’ बनाउँदा कृषि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोगी हुनेछ । तर, अहिलेसम्म कर्णालीमा भएको आर्थिक रूपमा सक्रिय तीन लाख ३२ हजार नौ सय ३१ जनशक्तिको उपयोग र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यद्यपि, कर्णालीवासी प्राकृतिक सम्पदारूपी चाँदीको घेराबाट समृद्धिको सपना देख्न थालेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
этапы продвижения брендакупити сигналізатори покльовки